China Broad bean Peeling machine orinasa mpamatsy sy mpamatsy | BAOTE
ZX-DL1 masinina mamelana tsaramaso dia fomba maina manokana ny milina fitotoam-boanjo, mahomby be ary tsy misy loto. Aorian'ny peeling, afaka mahazo ny tsaramaso malalaka isika.
Ny herin'ity milina ity dia mampiasa fitaovana 380V, 50hz, 5.5KW miaraka amin'ny fitaovana Stainless vy 304. Ny milina voanjo Vicia antsika dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra tsy misy harafesina ary mora tazonina.
ny milina fanamainana tsaramaso mampiasa fametahana horonan-taratasy miovaova ary mihodinkodina mba hibontsina ny hoditra voanjo malalaka. Taham-peeling avo, fanasarahana mandeha ho azy ny voan-koditra, fahombiazana avo lenta ary fandidiana tsotra. Ny tsaramaso be volo dia azo afangaro hanamboarana tsakitsaky.
Tombony amin'ny milina fanodikodin-koditra malalaka:
1) Ity milina peeler manana famolavolana mirindra sy rafitra mirindra,
2) Fampiasana ny fitsipiky ny fanahafana ny desquamate amin'ny tanana sy ny singa milina manokana, noho izany dia manana taham-peeling avo izy io,
3) Tombam-bidy manontolo ary avo lenta ary tsy fandotoana sns.
4) Ny milina dia fitaovana ilaina amin'ny vokatra fanodinana almond, tsaramaso malalaka sns.
5) Tsy tapaka ny tsaramaso malalaka voahitsaka, tonga lafatra ny lokony, tsy mena volontany ny atiny ary tsy miova ny proteinina.
Fanamarihana --- Satria tsy mitovy ny hamandoan'ny akora,
ny mpanjifa dia afaka manangana ny hafainganam-pandehan'ny motera sy ny fotoana famoahana azy araka ny tena izy. Amin'ny ankapobeny, ny hafainganam-pandeha tsara indrindra dia 45hz ary ny fotoana famoahana dia 3-3.5 minitra. Alefaso azafady toy ny horonan-tsary ilay masinina.
① Alefaso ny herinaratra ary tsindrio ny bokotra maitso. Hamarino tsara fa mandeha ny jiro mena.
② Kitiho ny bokotra maitso, avy eo atsangano amin'ny 40hz-45hz ny hafainganam-pandehan'ny motera (Napetrakay ny hafainganana 45hz).
③ Arotsaho ao anaty fitoeram-pako ny tsaramaso 5kgs eo ho eo.
④Atehio ilay rocker an'ny lavaka famahanana dia avelao ny tsaramaso malalaka hiditra ao anaty fitoeram-pako. Ny masinina dia hikorisa ny tsaramaso.
⑤Aorian'ny 3-3.5minuts, afindra ny rocker an'ny lavaka famoahana dia hivoaka ireo tsaramaso efa vita.
Teo aloha: fastener
Manaraka: Masinina mihombo amin'ny vala
Masinina Peeling Broad Broad
Faba Peeling Machine
Miendrika endrika feno paiso feno paiso feno hoditra
Masinina Sodina Pipe, U Bolts, Bolts amin'ny kalesy, Bolt firafitra, Hex Bolts, Lag Bolts,